Booliska Sool Oo Gacanta Ku Dhigay 2 Nin Oo Ku Eedaysan Dilka Nin Ganacsade ahaa – HormoodNews
12/20/2017 10:35 pm by Khadar Muuse Views: 10
Laascaanood (HMN): Taliska qaybta booliska ee gobolka Sool oo kaashanaya ciidamadda milateriga ayaa gacanta ku soo dhigay 2 nin oo la sheegay in ay ka danbeeyeen dilka nin ganacsade ahaa oo todobaadkan lagu dilay magaaladda Laascaanood.
Badhasaabka gobolka Sool Cabdi Khayre Dirir, ayaa sheegay hawl gal balaadhan oo socday 4 maalmood oo ay ciidamadda booliska iyo kuwa milateriga gobolkaasi ku raadinayeen eedaysaneyaashaasi loo aanaynayay dilka ganacsadahaasi in aakhirkii lagu guulaystay soo qabashadoodda.
Labadda nin oo maanta gelinkii danbe ay soo qabteen boolisku ayaa ku eedaysan in ay gaysteen dilka nin ganacsade ahaa oo magaciisa la odhan jiray marxuum C/naasir Cumar Shaacuur oo habeenkii Sabtidu soo gelaysay ee todobaadkan lagu dilay magaaladda Laascaanood.
Eedaysaneyaashan ayaa la sheegay in kadib markii ay dilka gaysteen in ay magaaladda Laascaanood uga baxsadeen dhinaca dhulka baadiyaha ah, halkaasoo ay maalmihii u danbeeyay ku dhuumaalaysanayeen.
Badhasaabka gobolka Sool Cabdi Khayre Dirir, oo ka warbixinayay hawl galkaasi lagu soo qabtay labadda eedaysane iyo mudadii uu qaatay, waxaanu yidhi “Hawl galkii 4-ta maalmood socday ee ay hormoodka u ahaayeen ciidanka booliska oo kaashanayay ciidamadda qaranka, in uu soo gebagaboobay galabta.
Waxaan u mahad celinayaa saraakiisha iyo ciidamadda hogaaminayay hawl galkaasi lagu raadinayay nimankii dilka u gaystay 15-kii bishan ku dilay magaaladan Laascaanood, ganacsade C/naasir Cumar Shaacuur”.
Geesta kale badhasaabka gobolka Sool ayaa madaxweynaha cusub iyo bahda cadaaladda jamhuuriyadda Somaliland ka codsaday in si dhakhso ah eedaysaneyaashan sharciga loo hor geeyo.